Osteoarthritis - Sababta, Daaweynta iyo Daawooyinka | Waa inaad tan ka ogaataa osteoarthritis.
Cudurka Osteoarthritis (osteoarthritis) - Sababta, daaweynta iyo cabirrada
Cudurka lafaha (osteoarthritis) wuxuu badanaa soo muuqdaa nolosha dambe. Osteoarthritis waxaa lagu qeexaa sida "tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah (ama marar dhif ah, polyarticular) xaalad saameyn ku yeelan kara gacmaha iyo isku-dhafka miisaanka culus ee waaweyn.Osteoarthritis waxay ka timaadaa erayga Giriigga ah "arthrosis" oo macnaheedu yahay wada jir. Markaad ka hadlaysid osteoarthritis, tan micnaheedu waa xirashada wadajirka inta badan wada hadalka. Hoos u dhaadhac si aad u aragto fiidiyowyo jimicsi oo dheeri ah oo jimicsiga kaa yareyn kara xanuunka iyo xumaanta awgeed osteoarthritis.
TALO: Dad badan oo qaba cudurka osteoarthritis iyo arthritis ayaa jecel inay isticmaalaan galoofisyo isdabamarin si gaar ah loo waafajiyay (xiriiriye wuxuu ka furayaa daaqad cusub) si loo hagaajiyo shaqada gacmaha iyo faraha. Kuwani waxay si gaar ah ugu badan yihiin dhakhaatiirta rheumatologists iyo kuwa ku dhaca cilladda tunnel tunnel syndrome. Waxaa macquul ah inay sidoo kale jiraan suulasha suulasha og sharaabaad riixo khaas ah haddii ay ku dhibayaan suulasha adag ee adag - suurogal hallux valgus (suulasha lugta weyn).
Sidoo kale aqri: 15 Calaamadaha hore ee Rheumatism
VIDEO: 5 Jimicsi Dhar ah Oo Lagaga Soo Horjeedo Spinal Stenosis (Xaalado Nabar Xun Oo Dhabarka Ah)
Cudurka osteoarthritis (osteoarthritis) wuxuu sababi karaa xaalado adag oo xagga dambe ah oo sababi kara cuncun dareemayaasha kacsan. Xaaladaha dareemeyaasha ciriiriga ah ee noocan oo kale ah ayaa sidoo kale loo yaqaanaa stenosis laf-dhabarka.
Shantaas jimicsi iyo jimicsiga fidinta ayaa kaa caawin kara inaad ilaaliso dhaqaaqa dhabarkaaga oo sidaasna u yaraato dareemayaasha isku xidhan. Hoos guji si aad u aragto layliyada.
VIDEO: 5 Jimicsi Xoog Xoog Leh Oo Ka Soo Horjeeda Xaaladaha Nabar xun ee Dhabarka ah Sababta Osteoarthritis
Waxa kale oo muhiim ah in la kordhiyo xoogga muruqyada dhabarka ee qoto dheer si loo yareeyo kala goysyada dhabarkaaga. Fiidiyowga hoosta waxaad ku arki kartaa shan jimicsi oo xoog leh oo kaa caawin kara inaad dib u soo noolaato xoogna sidaas oo kale uga hortagto sii xumaanshaha. Barnaamijka jimicsiga waa in la sameeyaa afar jeer usbuucii si waxtarka wanaagsan loo helo.
Sababta: Maxaan u leeyahay osteoarthritis?
Osteoarthritis, oo sidoo kale loo yaqaan osteoarthritis ama osteoarthritis, ayaa sababa xirashada caadiga ah ee kala goysyada iyo carjawda - laakiin markii aan intaas iri, waa cudurro is-goysyada iyo isku-darka xubnaha oo sababi kara lafo-beelka da'da hore. Dabcan, waxaa sidoo kale jira qodobo halis u ah inuu ku dhaco osteoarthritis sida ku xusan qodobka dambe. Carjawdu waa waxoogaa wada-jir ah oo u jiifa sidii lakab ilaalin oo ku dhow dhamaadka lugta. Markay tahay xaalad culus, carjawda si tartiib tartiib ah ayaa loo burburin karaa waxaad halis ugu jirtaa inaad lafaha taabato lafta laabatada.
Ha u oggolaan in cudurka osteoarthritis kaa joojiyo inaad ka fikirto waxqabadyada maalinlaha ah - Photo Wikimedia Commons
Halkee bay caan ka tahay in la helo osteoarthritis?
Cudurka 'Osteoarthritis' waxaa badanaa lagu sameeyaa kala-goysyada miisaanka leh sida jilbaha, qoorta, miskaha iyo qaybta hoose ee hoos u dib. Laakiin waa sidaas Dhamaan xubnaha jirka waxaa saameyn ku yeelan kara osteoarthritis.
Sidoo kale aqri: Sidoo kale jimicsi lagu samayn karaa barkada biyaha kulul ee ka hortagga Fibromyalgia
Waa maxay farqiga u dhexeeya osteoarthritis iyo arthritis?
Cudurka osteoarthritis waa laabasho caadi ah. Cudurka arthritis-ku wuxuu tilmaamayaa inaan sidoo kale ku leenahay habraac caabuq xagga wadnaha, sida rheumatoid arthritis. Calaamadaha caadiga ah ee arthritis-ku waa casaanka maqaarka hareeraha isugeynta, si cad u barar og si weyn hoos u dhigay dhaqdhaqaaqa wadajirka ah.
Maxay yihiin arrimaha halista u ah cudurka osteoarthritis?
Kordhinta culeyska ayaa kordhin kara fursadda osteoarthritis / laabatooyinka laabatada. Miisaan culeys sare leh Waxay kordhisaa khatarta osteoarthritis-ka ee ku dhaca kala-goysyada miisaanka culus sida sinta, qoorta iyo jilbaha. Guud ahaan culeys sare ama dhaawac ka yimaada cayaaraha iyo shaqada sidoo kale waxay dardargelin kartaa osteoarthritis kasta, iyo tusaale ahaan, ciyaartooyda kubada gacanta waxay u muuqdaan inay yeeshaan osteoarthritis ee jilbaha sababtoo ah dhaawacyada iyo muruqyada soo noqnoqda ee dusha sare.
Shaqo culus, soo noqnoqod leh waxay u horseedi kartaa cudurka osteoarthritis ee hore - Photo Wikimedia Commons
Sida laga soo xigtay "Iskucelcelis ku saabsan Rheumatology»Laga soo bilaabo 1998, kala bar dadka ka weyn 65 ayaa qaba osteoarthritis baaritaanka raajada. Markay da'du ka weynaato 75 sano, 80% waxay ku helaan natiijooyinka osteoarthritis raajada.
Sidoo kale aqri: Marxaladaha 5aad ee Osteoarthritis (Sida loo sii xumeeyo Osteoarthritis)
Waa maxay Calaamadaha Osteoarthritis-ka?
Xirashada wadajirka ah waxay sababi kartaa calaamadaha laabatooyinka qaab ahaan qallafsanaan wadajir ah og xanuun wadajir ah. Mid ayaa waliba khibrad u leh nabarro ku saabsan wadajirka ay saameeyeen iyo mararka qaarkood sidoo kale 'ilaalinta muruqyada' oo ah qaab muruqyo cidhiidhi ah / dhibco kiciya natiijada. Dhaqdhaqaaqa wadajirka ah oo la yareeyay sidoo kale waa caadi. Mararka qaarkood osteoarthritis muhiim ah ayaa sidoo kale lagu arki karaa sidii lugaha ayaa is xoqaya midba midka kale carjawda awgeed, oo loo yaqaan 'foojignaan'. Waxa kale oo ku dhici kara dhexdhexaad ilaa osteoarthritis-ka waa jirka hoos u dhiga lugaha dheeriga ah, waxa loogu yeero 'lafdhabarta lafta'.
Ka hortagga iyo daaweynta cudurka osteoarthritis
Markay noqoto osteoarthritis, waxaa ugufiican inaadan ahaynka hortag carmal ah. Way adag tahay in wax la sameeyo gaar ahaan marka osteoarthritis-ka uu jiro marka hore. Haddii aad cayil culus tahay waa inaad isku daydaa inaad lumiso miisaanka maxaa yeelay tani waxay yareyn doontaa culayska saaran kala-goysyada miisaanka qaadista. Tababbarka gaarka ah waxay kaloo kaa caawin kartaa dib u dhaca wixii osteoarthritis ah. Aruurinta wadajirka ah ee ay sameeyeen dhakhaatiirta loo yaqaan 'chiropractor' ama therapist the manual sidoo kale waxay leedahay saameyn caafimaad oo la xaqiijiyay:
Daraasad meta (Faransiis et al, 2011) ayaa muujisay in daaweynta bukaanka ee osteoarthritis-ka misigta ay leedahay saameyn togan marka la eego xanuun joojinta iyo hagaajinta shaqada. Daraasaddu waxay soo gabagabaysay in daaweynta bukaan -socodka ay ka waxtar badan tahay tababarka daaweynta osteoarthritis. ”
Glucosamine sulfate oo lagu daro chondroitin sulfate (Akhri: 'Glucosamine' sulfate oo ka dhan ah xidhashada? ') ayaa sidoo kale muujiyay saamaynaya osteoarthritis dhexdhexaad ah ee jilbaha ee daraasad uruurinta weyn (Clegg et al., 2006).
Gunaanadku wuxuu ahaa:
“Glucosamine iyo chondroitin sulfate kaligood ama isku darka ma aysan yareynin xanuunka si wax ku ool ah guud ahaan kooxda bukaanka qaba osteoarthritis ee jilibka. Falanqaynta sahamintu waxay soo jeedinaysaa in isku-darka glucosamine iyo chondroitin sulfate laga yaabo inay waxtar u lahaato koox hoosaadka bukaanka qaba jilibka dhexdhexaad ilaa-daran daran. ”
Horumar ahaan oo la taaban karo ayaa gaadhay 79% (si kale haddii loo dhigo, 8 ka mid ah 10kii ayaa la soo roonaaday) ayaa lagu arkay kooxda dhexdhexaad ilaa mid daran (dhexdhexaad ilaa daran) xanuun jilibka ah oo sabab u ah osteoarthritis, laakiin nasiib darro tani muhiim ma ahan markii ay natiijada daraasaddan la daabacay. ee warbaahinta. Waxyaabaha kale, daraasadda waxaa lagu xusay joornaalka joornaalka ururka caafimaadka ee Norwey 9/06 cinwaanka "Glucosamine wax saameyn ah kuma lahan osteoarthritis", in kasta oo ay saameyn muuqata ku yeelatay koox hoosaadka daraasadda.
Sidoo kale aqri: 8 Tallaabooyinka Ka-Hortagga Dabiiciga Ee Ka Soo Horjeeda Rheumatism
Qofku wuxuu isweydiin karaa in qoraaga maqaalka uu kaliya ku tiirsanaa qodobbada joornaallada maalinlaha ah ama uu aqriyo kala bar gabagabada daraasadda. Waa tan caddaynta in glucosamine oo ay weheliso chondroitin sulfate ay leedahay saameyn muuqata oo muuqata marka loo barbar dhigo placebo:
Sharaxaada: Safka saddexaad, waxaan ku aragnaa saamaynta glucosamine + chondroitin marka loo eego saamaynta placebo (kiniinnada sonkorta). Saameyntu waa muhiim maadaama marinka (qeybta hoose ee sadarka saddexaad) uusan gudbin 1.0 - haddii uu ka gudbey 1 tani waxay muujineysaa muhiimadda tirokoobka eber natiijadana markaa waa mid aan shaqeynaynin.
Waxaan aragnaa in tani aysan ahayn kiiska isku-darka glucosamine + chondroitin ee daaweynta xanuunka jilibka gudaha koox hoosaadka ah oo leh dhexdhexaad ilaa xanuun daran, iyo su'aalaha sababta tan aan loo siinin diirad dheeri ah joornaalada la xiriira iyo saxaafadda maalinlaha ah.
Akhriso: Glucosamine sulfate daaweynta daaweynta osteoarthritis? Wax ku ool ah?
Is-Caawinta La-talinta ee Rheumatic iyo Xanuunka daba-dheer
riixo Buuq (sida sharaabaad isdaba-joog ah oo gacan ka geysta kordhinta wareegga dhiigga muruqyada xanuunsan ama galoofisyo isdabamarin si gaar ah loo waafajiyay calaamadaha laabotooyinka ee gacmaha)
Dhagsii sawirka si aad waxbadan uga akhriso galoofisyada riixo.
Cajalado yaryar (qaar badan oo qaba laabotooyin iyo xanuun joogto ah waxay dareemaan inay fududahay in lagu tababaro elastics-ka caadada ah)
Keebka Kubadaha dhibic (iskaa wax u qabso si aad u shaqeyso muruqyada maalin walba)
Kareemka Arnica eller qaboojiyaha (dad badan ayaa soo sheega xoogaa xanuun joojiye ah haddii ay isticmaalaan, tusaale ahaan, kareemka arnica ama qaboojiyaha kuleylka)
- Dad badan ayaa u adeegsada kareemka arnica xanuunka xanuunka ka dhasha kala-goysyada adag iyo murqaha oo xanuuna. Guji sawirka kore si aad waxbadan uga akhriso sida arnikakrem kaa caawin kara yareynta qaar ka mid ah xaalada xanuunkaaga.
Layli ka dhan ah osteoarthritis sinta
Jimicsiga muruqyada xasilloonida waxay jirka ka caawin kartaa inuu yareeyo kala-goysyada iyo discs intervertebral disc. Adiga oo labadaba ku tababaraya muruqyada u dhow, iyo sidoo kale inaad si joogto ah u sameyso jimicsi dhaqdhaqaaq ah - sida kuwa hoos ka muuqda - waxaad ku ilaalin kartaa wareegga dhiigga oo wanaagsan iyo dabacsanaanta murqaha. Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo inaad sameyso kuwan, ama kuwa la mid ah, laylis maalin kasta.
VIDEO: 7 Jimicsi oo looga soo horjeedo Osteoarthritis / Xiro Xiinka iyo Dhabarka
Xor baad utahay inaad isqorto kanaalkeena YouTube (halkaan riix) si aad u hesho barnaamijyo jimicsi oo bilaash ah iyo aqoon caafimaad.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: - Sidee Yoga u yareyn kartaa Fibromyalgia iyo Xanuunka daba dheeraada
Cudurka osteoarthritis ee sinta - Coxarthrosis
Akhri maqaalka ugu weyn ee ku saabsan osteoarthritis-ka sinta halkan (dhagsii halkan ama sawirka kore si aad u furto maqaalka weyn ee osteoarthritis maqaarka).
Waa maxay Hip Arthritis?
Wadajirka misiggu wuxuu ka kooban yahay godka misigta, oo ah qayb ka mid ah miskaha, iyo femur -ka femur. Labada godka misigta iyo kubbada misigta labaduba waa “dhar” ay ku jiraan carjaw jilicsan oo hubiya in dhaqdhaqaaqyada ay ka dhacaan iska caabbinta ugu yar ee suurtogalka ah.
Cudurka Osteoarthritis (osteoarthritis) ee sinta ayaa ah, sida magacu tilmaamayo, xirashada iyo jeexjeexa isbedelka sinta misigta, badanaa waxaa sababa gabow. Dhakhaatiirta caafimaadku waxay mararka qaarkood isticmaalaan ereyga 'coxarthrosis'. Taariikhda caafimaad iyo natiijooyinka ka soo baxa baaritaanka caafimaad ayaa keeni doona shaki xoog leh oo ku saabsan ogaanshaha cudurka, waxaana lagu xaqiijin karaa baaritaanka raajada.
Sinta laabatada waa muruqyada jirka halkaasoo osteoarthritis uu inta badan ku dhaco. Bukaannada waayeelka ah badanaa waxay arkaan raajo xirasho, laakiin qayb yar oo ka mid ah bukaannadan ayaa leh astaamo. Markaa osteoarthritis-ka laga helo raajo ma aha xanuuno waaweyn. 90% bukaannada ka weyn da'da 65 ee ka cabanaya xanuunka sinta waxay leeyihiin osteoarthritis ee sinta laabatada. Sanad kasta, qiyaastii 6.500 oo ah sanaadiiqda muruqyada ah ee Noorway ah, oo 15% ka mid ahi ay yihiin dib-u-dhis.
Cudurka 'Osteoarthritis' waa xaalad daallan oo baabi'isa isla markaana jabaya kala goysyada. Bilowga, waa carjawda qumman ee la burburiyay. Dusha siman ee u dhaxaysa godka misigta iyo femur -ka femur ayaa aakhirka noqon doonta mid aan sinnayn. Markaad socotid, “frictions” ayaa ka dhaca wadajirka, taas oo keenta xanuun. Ugu dambayntii waxaa jiri doona kala -saarid, dhaq -dhaqaaqu wuu sii liitaan oo wadajirku wuu adkaanayaa.
Waxaa jira farqi u dhexeeya aasaasiga (da'da-la xiriira) iyo kala-goysyada sinta sare. Xaaladahan soo socdaa waxay kordhinayaan fursadda lahaanshaha osteoarthritis-ka sare ee sinta: buurnaanta, miskaha hore ama jabka xubinta taranka, cilad-darrada ku dhasha sinta misigta iyo caabuqa sinta misigta.
Xanuunku si tartiib tartiib ah ayuu ugu socdaa gumaarka iyo xagga hore iyo dhinaca bowdada. Xanuunku badanaa wuxuu u jilciyaa jilibka. Xanuunku badanaa wuxuu yimaadaa markaad bilowdo socodka. Way ka sii yaraadaan xanaaqa ka dib markay socdaan dhowr ilbidhiqsiyo ama daqiiqado ah, laakiin ka dib way ka sii xumaadaan muddo ka dib. Culeys badan oo lugaha ku dhaca ayaa sii kordha xanuunka. Tartiib tartiib, xanuunku wuxuu ku dhacaa nasashada iyo habeenkii. Xanuunka habeenkii xanuunku muddo dheer buu soo socday. Masaafada socodka ayaa gaabinaysa, bukaanku wuu gaagayaa oo waa inuu adeegsadaa bakooradda.
PAGE xiga: - Marxaladaha 5-aad ee Kneartrose
Guji masawirka kore si aad ugu dhaqaaqdo bogga ku xiga. Haddii kale, naga raac warbaahinta bulshada si aad u hesho casriyeyn maalinle ah oo leh aqoon caafimaad oo bilaash ah.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Osteoarthritis
Xor baad u tahay inaad na weydiiso su’aal qaybta faallooyinka ee hoosta ku taal ama adigoo adeegsanaya bartayada bulshada.
Faransiis, HP. Daaweynta gacanta oo loogu talagalay osteoarthritis ee sinta ama jilibka - dib u eegis nidaamsan. Man Ther. 2011 Apr; 16 (2): 109-17. doi: 10.1016 / j.math.2010.10.011. Epub 2010 Dec 13.
"Compendium on Rheumatology", 1997-98. Waaxda Rheumatology, Isbitaalka Haukeland. Novartisserien, faghefte nr.1, 1997. Professor Hans-Jacob Haga.
Clegg DO, Reda DJ, Harris CL, Klein MA, O'Dell JR, Hooper MM, Bradley JD, Bingham CO 3rd, Weisman MH, Jackson CG, Lane NE, Cush JJ, Moreland LW, Schumacher HR Jr, Oddis CV, Wolfe F, Molitor JA, Yocum DE, Schnitzer TJ, Furst DE, Sawitzke AD, Shi H, Brandt KD, Moskowitz RW, Williams HJ. Glucosamine, chondroitin sulfate, iyo labada isku dhafan ee jilibka xanuun osteoarthritis. N Engl J Med. 2006 Febraayo 23; 354 ​​(8): 795-808.
Waa maxay eray kale oo guntiga xirtay?
Erey kale oo loo yaqaan 'jilbaha' waa jilibka osteoarthritis. Cudurka Osteoarthritis macnihiisu waa xirashada iyo jeexitaanka kalagoysyada iyo kilyaha. Xirashadaani waxay noqon kartaa mid la xiriirta da'da ama xaaladaha dhifka ah ee la xiriira dhaawacyada (osteoarthritis waxay si dhakhso leh ugu horumari kartaa wadajirka dhaawaca ah - tusaale ahaan, ciyaartoyda kubbadda gacanta ayaa leh kororka jilibka jilibka)
Maxay yihiin sababaha osteoarthritis ee kala-goysyada?
Waxaad ka heli doontaa sharraxaadda iyo macluumaadka ku saabsan sababaha osteoarthritis ee kala-goysyada hoosta qaybta 'sababta' oo ka sarreeya maqaalka.
Maxay ka qabtaan osteoarthritis iyo nitric oxide midba midka kale? Nitric oxide ma daaweyn kartaa cudurka osteoarthritis?
Nitric oxide waa gaas sun ah oo la sameeyay inta lagu gudajiray dheef-shiid kiimikaadka 'L-arginine' ee isku-dhafka nitric oxide (NOS). Joogitaanka sii kordhaya ee nitric oxide waxaa lagu arki karaa osteoarthritis iyo xirashada wadajirka. Markaad liqdid NG-monomethyl-t-arginine, hoos u dhac ku yimaada nitric oxide ayaa la arkay sidaas awgeedna waxyeello iyo barar yar oo ka jira aagagga (wax dheeraad ah ka sii akhri iyada). Maya, nitric oxide ma daaweyn karto cudurka osteoarthritis.
Ma ku qaadi kartaa osteoarthritis sinta shaqo darteed?
Haa, waad ku horumarin kartaa cudurka osteoarthritis ee sinta shaqada - gaar ahaan shaqooyinka culeyska badan saara culeysyada sinta misigta waxay leeyihiin dhacdooyin sii kordhaya oo ah xirmo wadajir ah iyo osteoarthritis. Sidii hore loogu sheegay maqaalka:
Miisaan culeys sare leh Waxay kordhisaa khatarta osteoarthritis-ka ee ku dhaca kala-goysyada miisaanka culus sida sinta, qoorta iyo jilbaha. Guud ahaan culeys sare ama dhaawac ka yimaada cayaaraha iyo shaqada sidoo kale waxay dardargelin kartaa osteoarthritis kasta, iyo tusaale ahaan, ciyaartooyda kubada gacanta waxay u muuqdaan inay yeeshaan osteoarthritis ee jilbaha sababtoo ah dhaawacyada iyo muruqyada soo noqnoqda ee dusha sare.
Inger wuxuu leeyahay,
Waxaan gacmaha iyo cagaha ku hayaa osteoarthritis, sidaas darteedna waxaan helay kiimoterabi qaab kiniin ah: methodextrate, oo aan qaato hal mar todobaadkii. Laakin waxaa igu sii badanaya lallabbo marka ay toddobaadyadu socdaan, waxaan isla markiiba dareemayaa inaan wax tabar ah ii hadhin. Ma aqoon u leh diyaarintan. Markaa waxaan la yaabanahay haddii qof uu haysto - ama isticmaalay kiniinnadan oo kale oo sheegi kara waxyeellooyin kasta iyo sida ay u saameeyaan osteoarthritis suurtogalka ah. Waxa aad isticmaalaysay 8 toddobaad hadda..
Ida Christine wuxuu leeyahay,
Hi Inger Faalladaada waan arkay oo waxaan rabay inaan faallo ka bixiyo. Hooyaday sidoo kale waxay u heshaa daawayn kiimiko (iyo psoriasis). Wax badan ayay la halgamaysay lallabo mar kasta. Dabadeed waxay heshay daawada cytotoxic ee qaab duritaan waxayna ka takhalustay lallabada. Laga yaaba wax aad kala hadli karto dhakhtarkaaga?
si qarsoodi ah wuxuu leeyahay,
Ma ku qaadataa Folic acid Methotrexate markaa? Kuwani waa inay ka hortagaan waxyeellooyinka sida lallabbo.
Karin wuxuu leeyahay,
Hello. Ka dib 15 sano oo aan ahaa macalin hore ee aerobics, waxaan ku dhacay polyarthrosis.
Wuxuu muujiyay osteoarthritis ee labada jilib, sinta, suulka weyn, faraha, garabka, qoorta iyo dhabarka hoose. Sidoo kale Chiari iyo Modic ayaa dhabarka ku beddelaya. Sadexda qaybood ee kala goysyada oo adkaaday ka dib spondylolysis markii uu ahaa 19 jir. Waa lagu qalay oo "nadiifiyey" saddex jeer jilbaha. Waqtiga u dambeeya wadarta guud ee synovectomy qiyaastii. laba sano ka hor. Condromatosis iyo chondrocalcinosis ayaa markaa laga helay labada jilib. Kuwani waa laba baaritaan oo aanan ka helin wax macluumaad sax ah oo ku saabsan dhakhtarka / lafaha. Waxa ay u muuqataa in aanay doonayn in ay wax ka qabtaan…Ma dhici kartaa in aanay ahayn wax caadi ah?
Ma aqaano, laakiin uma maleynayo inaan helo talo ku habboon ang tababar. Dhakhaatiirta lafaha ee qalliinka ugu dambeysay igu sameeyay ayaa sheegay in jilibka uu runtii "cadhooday" isla markaana uu yahay difaaca jirka. Rheumatologists waxay yiraahdaan wax kale, markaa way yara adagtahay in la xidhiidho tan iyo waxa aan sameeyo. Waxay u muuqataa inay wax yar ka og yihiin labada cudur ee dheeraadka ah. Waxay qaadataa wax yar ka hor inta aan igu dhicin barar ku dheggan seedaha iyo bararka / xanuunka. Waxay ka dhigtaa tababarka mid adag oo aan la saadaalin karin.
Waxa aan xoogaa caawimo ah ka helay daaweeyaha gacanta, laakiin waxa ay heshay saddex fasax umusha afar sano gudahood, markaa may fududayn in la helo la-socod joogto ah… Hadda u tag dhakhtarka jimicsiga jirka oo fiican waxaanu isku daynaa si taxadar leh tababarka xoogga.
Ma bixin kartaa talo ku saabsan tababarka ama daaweynta? Mise ma taqaan qof kasta oo aqoon u leh chondrocalcinosis? Waxa kaliya ee aan rabo waa nolol maalmeed aan xanuun lahayn iyo in aan dib u dhigo ilko ilka ilaa inta suurtogalka ah.
Waad ku mahadsan tahay talada iyo talada.
Maya, waad saxan tahay - chondromatosis iyo chondrocalcinosis maaha cudurro caadi ah waxayna leeyihiin tilmaamo caafimaad oo aan caddayn. Sidaa darteed, way ku adag tahay dhakhaatiirta lafaha ee aad la xiriirtay inay wax ka qabtaan.
Sidaad ogtahay, cudurka difaaca jirka (autoimmune disease) wuxuu ka dhigan yahay in habka difaaca jidhku iskiis isu weeraro - kiiskaaga, waxay u muuqataa inay weerarto kala-goysyada iyo carjawda, sida rheumatoid arthritis-ka.
Hadaanan ku arag qof ahaan, macquul ma noqon doonto inaan ku siino talo iyo talo gaar ah. Gaar ahaan tixgelinta sida uu u adag yahay xanuunkaaga maalin kasta. Anagoon ku arag bukaan-socod, nasiib darro ma dhihi karno wax aan ka ahayn inaan kugu dhiirigelineyno inaad sii wadato rugaha caafimaadka kuwaas oo sidoo kale diiradda saaraya tababarka, iyo sidoo kale daaweynta jireed.
Laakin haddii aad rabto qaar ka mid ah layliyada tabobarka ee guud markaa dabcan taas ayaan kaa caawin karnaa. Ma jiraan wax aad uga baahan tahay in lagaa caawiyo?
Nasiib wacan iyo soo kabasho wanaagsan!
Vigdis wuxuu leeyahay,
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Talada tababarka guud ee Osteoarthritis si fiican uma shaqeyso. Hadda waxaan caawimaad ka helaa daaweeyaha jimicsiga halkaas oo aan ku bilowno laba mashiin oo xoogga lugaha si aan u arko waxa aan u dulqaadan karo. Qaaday riixista lugaha oo aad u culus oo ku dhow marmar mararka qaarkoodna si fiican ayay u socotay ilaa hadda. Dhanka kale, tababarka barkada ee heerka "marwada duqda" waxay i siisaa xanuun weyn ka dib! Rart. Wax badan ayaan lugeeyaa, laakiin waxay si fiican ugu shaqeysaa xitaa dhulka. Sidaa darteed ma aha sirgaxan sida lagu taliyay. Markaa hadda waxaan sii wadaa tijaabinta tababarka xoogga ilaa inta ay si fiican u socoto. Hadafka waa in la helo nolol maalmeed ka wanaagsan oo dib loo dhigo sanaaciga jilibka ilaa inta suurtogalka ah.
Waxaan jeclaan lahaa in aan la hadlo qof yaqaana labadan cudur oo aan caadi ahayn sababtoo ah tani waxay sidoo kale leedahay wax la sameeyo wakhti iyo talo ku saabsan qalabka jilibka. Dhakhaatiirta lafaha caadiga ah waxay tijaabiyaan qallafsanaanta kala-goysyada, laakiin waxaan leeyahay kala-goysyada hypermobile oo aan qallafin, markaa waxay u maleynayaan "ma aha mid aad u xun". Laakin ma dareemaan xanuunka mana arkaan bararka marka ay dhibaatadu dhacdo. Anoo tan la nool in ka badan toban sano, uma iman si tartiib tartiib ah laakiin si lama filaan ah uma iman. Sidaad arki karto, anigu kuma jiro heerka A4 oo markaa waxaan dareemayaa inaanan helin gargaarka aan u baahanahay.
Dhakhaatiirta lafaha iyo rheumatologists midkoodna ma la tacaalayaan, oo si ay u noqoto culays dheeraad ah. Ma taqaanaa qof kasta oo wax aqoon ah u leh chondrocalcinosis ama chondromatosis, aad baan u xiiseynayaa inaan ogaado. Way fiicantahay iimayl ahaan haddii ay jirto meel ka fiican oo lala xiriiri karo. ?
Salaan mar labaad,
Ok, waxaan kugula talineynaa inaad sii waddo waxa aad ku faraxsan tahay. Kiiskaagu waa, sidaad sheegtay, ma aha gebi ahaanba A4. Dhaqdhaqaaqa kacsanaanta waxaa lagu tijaabin karaa Beighton Score Hypermobility Test - weligaa ma qaadatay imtixaannadan ama kuwa la mid ah?
Waxaan kuu sheegi doonnaa haddii aan la kulanno khabiiro ku saabsan mowduuca aad sheegtay iyo haddii aan maqalno wax ku saabsan wax ku saabsan chondrocalcinosis iyo chondromatosis.
Berit Hægeland wuxuu leeyahay,
Ma jiraan bacaha xabka ah iyo ka qaadista bursitis ee sancada wadajirka jilibka?
Nicolay v / vondt.net wuxuu leeyahay,
Nasiib darro, kuma fahmin su'aashaada halkan. Fadlan ma qori kartaa wax yar oo kaabaya?
Ma jiraan bacaha xabka ah ee jilibka marka sanaacada la geliyo
Haa, waa - sida caadiga ah.
Gerd Valkve wuxuu leeyahay,
Hal usbuuc kadib 2 cortisone irbado ah, waxa aan xanuun ka dareemay muruqa jidhkayga. Waxa uu la soo qaatay dhakhtarka lafaha / physiotherapist, hore uma uu maqal. Ka dib cirbadeynta cortisone no. 3, waxaa igu dhacay xanuunka gacmaha iyo lugaha. Ma laga yaabaa inay weli noqoto saameyn dhinac ah?
Anita wuxuu leeyahay,
Waxaan qabaa osteoarthritis aagga suulka ee labada gacmood. Saddex jeer ayaa lagu qalay. Markii ugu dambeysay, waxay galiyeen qayb macmal ah oo seedayda ah inta u dhaxaysa lugahayga qayilaya.
Anne wuxuu leeyahay,
Waxay saameyn wanaagsan ku leedahay baaskiil wadida goobta jimicsiga waxayna leedahay faashad jilibka ah oo habeenkii la isticmaalo.
Erna Marie wuxuu leeyahay,
Wuxuu ka helay osteoarthritis faraha, lugaha, dhabarka hoose iyo jilbaha. Wuxuu ku helay sanaaci jilibka jilibka bidix 2016 wuxuuna tababaraa 2-3 maalmood todobaadkii. Ilaa February -18 ka qayb qaatay «tababarka kooxda baxnaaninta». Tani si cajiib ah ayay aniga ii fiican tahay. Jimicsi la'aan, waxaan isla markiiba ku arkaa qallafsanaan. Kharash badan ayaa ku baxaya in lagu tababaro xarunta jirdhiska, laakiin waa maalgelin lagu sameeyo caafimaadkaaga.
deeqsi wuxuu leeyahay,
Waxaan qabaa nooc ka mid ah Ataxia, RA iyo osteoarthritis ee qoorta. Hadda laga shakiyo osteoarthritis ee sinta sababtoo ah xanuunka dhabarka hoose iyo sinta. Waxay ku haysaa CT, ma jecla MRI. Goorma ayuu qalliinku khuseeyaa? Isku day inaad wax yar ku jimicsato guriga. Uma adkeysan karo daaweynta jimicsiga daalka joogtada ah awgeed. Waxaan ahay 67 jir, quusna waan ku jiraa.
Lin wuxuu leeyahay,
salaan . Aad baan u dhibay in aan xanuun ka dareemayo cududahayga, faraha (gacanta sare iyo hoosteeda), cagaha, anqawyada iyo jilbaha hoostooda. In muddo ah ayaa sidan ahaa hadda. Waxa kale oo la odhan karaa in tani ay ka sii darayso qabow, ka dibna way ka sii daran tahay. Wax fikrad ah waxa ay tahay?
Steiner wuxuu leeyahay,
Waxa la iga helay polyarthrosis Waxay ku bilaabatay sinta oo yara xanuuntay markii la fidiyay 4 sano ka hor. Khabiir ayaa si degdeg ah ugu baxay baaritaanka ka dib markii la tijaabiyay dhaqdhaqaaqa hal sinta, si kastaba ha ahaatee mid aan xanuun ku qabin. Tan iyo markaas, waxaan dareemay xanuun ku dhawaad ​​dhammaan jirkayga. Waan doqonoobayaa sababtoo ah meelna kama jawaabo. Faruhu waa qallafsan yihiin subaxdii, dhabarka hoose. Dhabarka dambe wax baa ku jira oo in yar damqanaya mar kasta. Sinta ayaa garaacaysa, xanuun badan maaha, laakiin waa la dareemi karaa. Hagaag, waxay noqon kartaa polyarthrosis.
Laakin markaa: Maalin maalmaha ka mid ah, xanuun ayaa ka haya labada curcur, iyo suulka iyo canqowga. Laba maalmood ka dib, ku adkaan labada anqaw iyo hal suul oo weyn. Aad buu u xanuunayaa garbaha usbuuca ka dib, laba maalmood ka dib waxaan xanuun ka dareemayaa seedaha ku wareegsan suxullada iyo suulka. Kadib waxaa dhici karta in aan dareemo madax qallafsan oo qoorta ah iyo h .. madax xanuun. Kadibna dhammaanteen waan rogronaa oo u qaadnaa siday u kala horreeyaan.
Waa inaan si joogto ah u qaataa Vimovo sababtoo ah haddii aan gooyo waxaa igu dhacay qandho jidhkayga oo dhan ah, muruqyada dhabarka ayaa bilaabay inay xanuunsadaan, jidhkayga oo dhanna wuxuu dareemaa xanuun iyo "qurux". Waxa kale oo aan la halgamaa daal aan la rumaysan karin, xusuusta oo liidata, af-goosyada markaan daalo, ama xanaaqo.
Waxaan akhriyay maqaal ka soo baxay hal ama urur kale oo ku saabsan calaamadaha Fibromyalgia, waxay ka dhawaajisay tan daal, xusuus, gunuunac luqadeed iyo in uu yimaado oo tago.
Ma qabo wax dareen ah in wax "xiran yahay", kuwaas oo sawiradu sidoo kale xaqiijinayaan. Waxaan dareemayaa in wax jidhkayga ku wareegsan yihiin oo ay isku urursanayaan xubnahayga (waxay u egtahay doqonimo, laakiin taasi waa sida ay dareemayso). Meesha kaliya ee ay ku xanuunto waa miskaha iyo dhabarka hoose / barida (labo-goysyada barafka) Iyagu iima jawaabi karaan waxan oo dhan sabbaynaya. Waxaan tababaraa xeegada barafka sanadka oo dhan, sidoo kale wiilkaygu, laakiin ma adkeysan karo caadada ah inaan mar dambe eego. In yar oo la qaboojiyo waa dhimasho
Ma krabat firfircoon oo 52 sano ah, oo leh koox isboorti oo gaar ah, ma fadhiisanayso hal ilbiriqsi, ma aha miisaan culus.
Kani waa polyarthrosis..?